Nilaza i Hawaii fa tsy hatramin'ny 3800 ireo mpandeha sambo mitaingina ao amin'ny NCL Jewel sy HAL Maasdam
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Nilaza i Hawaii fa tsy hatramin'ny 3800 ireo mpandeha sambo mitaingina ao amin'ny NCL Jewel sy HAL Maasdam
Nanajanona ny fizahan-tany i Hawaii, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia notenenin'ny tompon'andraikitra fanjakana izany ary tsy mitaky risika amin'ny fanafarana Coronavirus amin'ny sambo fitsangantsanganana.
Ny Departemantan'ny fitaterana any Hawaii dia hamela sambo fitsangantsanganana roa mitondra mpandeha sy ekipa an'arivony miantsona ao amin'ny Harbor Harbour any Hawaii, USA, saingy tsy misy olona ao anatiny na dia ny olom-pirenena amerikana aza avela hiala ny sambo. Tamin'ny 7 febroary dia nitatitra ny eTN a Mpandeha Hawaii any amin'io zotra fitsangantsanganana norveziana io ihanys sambo Jade miady ny hahazo famerenam-bola ho an'ny fitsangantsanganana nofoanana noho ny COVID-19
Ity fanambarana ity dia sombin-tarehin'ireo torolàlana nambara teo aloha izay nateraky ny afo avy amin'ny mponina ao Oahu ary koa ity boky ity izay miahiahy momba ny valanaretina coronavirus.
Ny Harbour Division any Honolulu dia hanaiky ireo sambo roa ao amin'ny Harbor Harbour mba hamenoana lasantsy sy hamerenana amin'ny laoniny ireo sakafo sy kojakoja, saingy tsy avela handao ireo sambo ny mpandeha sy ny ekipany.
Rehefa nanambara ny sambo fitsangantsanganana amerikana rehetra fa tsy nisy 30 andro ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina dia efa an-dranomasina avokoa ireo sambo roa ireo.
Ny fanapaha-kevitra tsy hamela ny mpandeha sy ny ekipa nidina dia tonga taorian'ny fanambarana nataon'ny governora tamin'ny talata ny ezaka nataon'ny "15 Andro hampiadana ny fanaparitahana" ny fanjakana, izay nitondrany ireo mpitsidika handinika ny fanemorana ny diany mankany Hawaii farafahakeliny 30 andro, hoy ny tompon'andraikitra amin'ny fitaterana. .
Ireo sambo roa ireo dia tsy manana tranga marim-pototra COVID-19.
Ny Jewel an'ny Cruise Line Norveziana, mitondra mpandeha 1,700 XNUMX, dia tsy navela namoaka ny mpandeha tao amin'ny Port of Pago Pago Samoa Amerikanina. Tombanana ho tonga ny alahady izao.
Ny Maasdam an'i Holland America Line, mitondra vahiny 842 sy mpikambana ekipa 542, dia kasaina ho tonga ao Honolulu amin'ny zoma ao amin'ny Pier 2. Nofoanana ny fiantsoana seranan-tsambo ao Hilo, ary nilaza ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana fa i Honolulu no seranana ankafizina.